Eden Hazard oo shaaciyey Wadanka uu jeclaan lahaa in ay Finalka Wada Cayaaraan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Eden Hazard oo shaaciyey Wadanka uu jeclaan lahaa in ay Finalka Wada Cayaaraan?
(08-07-2018) Cayaaryahanka Xulka kubada Cagta Belgium-ka ee Eden Hazard ayaa shaaca ka qaaday in uu jeclaan lahaa in ay Finalka koobka aduunka wada Cayaaraan dalka England kaas oo uu leeyahay waa wadan ku haboon in uu kama dambaysta yimaado.
Eden Hazard oo Wax laga weydiiyey sababta uu u doortay England ayaa sheegay in marka koowaad uu kor u kici doono xiisaha Finalka koobka aduunka marka labaadna uu u doortay in England ay isku soo arkeen Wareega Gruubyada uuna aaminsanyahay in ay koobka ka xoogi karayaan.
Semi-Finalka koobka aduunyada 2018 ayaa waxaa isugu soo haray 4 Wadan oo qaarada yurub ah waxaana Maalinka Talaadada wada dheeli doona dalalka France iyo Belgium iyo halka Arbacada ay fooda is dari doonaan England iyo Croatia lamana qiyaasi karo labada wadan ee Finalka imaan doona.